Kaody fampiroboroboana ny fahitalavitra Youtube - Desambra 2020 - Tapakila
Youtube TV dia sehatra vaovao izay manolotra ny mpampiasa amin'ny serivisy fahitalavitra internet mahafinaritra. Afaka mivezivezy mampiasa ny tranokalany ny rehetra. Tsara kokoa raha manana famandrihana ianao hanombohana fialamboly tsy voafetra. Amin'ity toro-lalana ity dia hizara kaody promo vitsivitsy izahay. Ireo dia hahafahanao manomboka mivantana amin'ny fitaovanao haingana. Ankafizinay ny fialamboly tonga lafatra izay entin'ny Youtube TV eto ambony latabatra. Google dia fantatra fa manatsara ny serivisin'izy ireo alohan'ny fanombohana. Ny fanampim-baovao farany momba ny tontolo iainana dia manana ny tanjany betsaka.
Tapitra ny andron'ny fahitalavitra tariby. Miezaka ny hitondra revolisiona amin'ny fahitalavitra ireo goavambe Internet. Sehatra toa Netflix sy Amazon Prime Video dia eo alohan'ilay hazakazaka. Youtube TV dia mitondra anao fahita lavitra amin'ny fahita lavitra.
Momba ny Youtube TV:
Ny serivisy fahitalavitra Youtube dia natokana ho an'ny mpihaino an'i Etazonia fotsiny. Amin'ny faritra vitsivitsy voafantina ihany no misy an'izy ireo. Na iza na iza dia afaka mividy ny serivisy ary manova tanteraka ny fomba laniny amin'ny fialamboly. Izy ireo dia mitondra fiasa miavaka amin'ny streaming. Azonao atao ny manandrana ny tranokala ary mamaky bebe kokoa momba ny serivisin'izy ireo. Mahazo miditra amin'ny fantsona fahitalavitra mivantana 85+ ao anaty famandrihana tokana ireo mpampiasa. ny manahirana ny Cable TV Tsy misy intsony ny vongan-drano ankehitriny. Azonao atao ny manapaka ny tadiny ary manangona $ 500 / taona amin'ity serivisy ity. Misy add-ons misy raha mila fanampiana ianao.
Misy tolotra misy ve?
Youtube TV dia tsy manome tolotra lehibe ho an'ny mpampiasa azy. Misy ny promo efa mihazakazaka teo aloha, saingy tapitra ny ankamaroany. Azonao atao ny manandrana ny vintana hahitanao hoe iza amin'ireo no miasa. Androany ny orinasa teknolojia dia manandrana mitazona ny fidiram-bolany. Ilaina ho an'ireo mpampiasa rehetra te hanana fihenam-bidy ny kaody fampiroboroboana.
Makà fihenam-bidy ho an'ny mpianatra Premium YouTube
Kaody fampiroboroboana ny fahitalavitra Youtube (2020):
Misy kaody Promo vitsivitsy izay hanampy anao. Izy io dia mety indrindra ho an'ireo mpampiasa te hampihena ny fandaniany. Fantatsika fa ny fananana serivisy streaming maromaro dia mety ho lafo be. Youtube dia manandrana mampihena ny vidinao amin'ny alàlan'ny fanolorana sehatra tokana. Ireto ny tolotra izay mandeha amin'ny sehatra vaovao amin'izao fotoana izao. Ampiasao ireo ary tehirizo amin'ny fividiananao.
Ny coupon dia manampy anao hahazo fihenam-bidy 55% amin'ny fividiananao. Izy io dia miasa miaraka amin'ny famandrihana ary manan-kery amin'ny 2020.Hanampy anao hampihena ny vola lany amin'ny fividianana izany. Tsy mandeha intsony anefa ny promo. Ireo mpampiasa dia afaka mampiasa ity kaody ity ary mampihena ny fandaniany.
Tolotra Chromecast -
Ny tolotra Chromecast dia misy dieny izao ho an'ireo mpandray anjara amin'ny Youtube Youtube rehetra. Na iza na iza dia afaka mankafy ny serivisy premium misy azy ireo tsy misy manahirana mihitsy.Ny drafitra dia misy ny fitaovana Chromecast mba hanamorana ny fivezivezena. Ny programa fiaraha-miasa dia mety indrindra ho an'ireo mpampiasa izay maniry vahaolana fialamboly feno.
Ny vidin'ny Chromecast dia $ 49,99, saingy azonao atao maimaim-poana izany amin'ny drafitra premium Youtube TV. Izy io dia fifanarahana tonga lafatra ho an'ireo mpampiasa izay manomboka mpampiasa ny serivisy. Ity tolotra ity dia misy mandritra ny fotoana voafetra ihany, ary miangavy mba ho haingana amin'ny fividiananao.
Chromecast ho an'ny Windows 10
Tolotra DVR tsy voafetra -
Youtube TV koa dia manome ny mpampiasa fahafaha-mahazo serivisy DVR tsy voafetra amin'ny vidiny ambany. Tsy misy vidiny fanampiny amin'ny fisoratana anarana. Afaka mahazo fidirana amin'ny session streaming mivantana atiny amin'ny alàlan'ity sehatra ity ny mpampiasa. Betsaka amintsika no tsy mahita ny seho tiantsika indrindra noho ny asa avy amin'ny kolontsaina an-trano.
Raha te hitazona ny fampisehoana mivantana anao ianao dia ilaina ny serivisy DVR. Ny famandrihana Cable TV amin'ny ankapobeny dia handoa anao ny taha ambony amin'ity fampiasa ity. Youtube TV dia manolotra azy maimaim-poana ho an'ny mpanjifany rehetra.
Endri-javatra amin'ny fahitalavitra Youtube:
Misy endri-javatra marobe miaraka amin'ny Youtube TV. Afaka mampiasa ity sehatra ity ny mpampiasa mba hankafizany fialamboly mahafinaritra. Ireto ny sasany amin'ireo fiasa premium hitanay fa nanampy tamin'ny serivisy Youtube TV an-tserasera.
1. Tsy misy fifanarahana isan-taona
Ny fifanarahana isan-taona dia manahirana be ho an'ny ankamaroantsika. Tsy te-hanolo-tena amin'ny serivisy misy karama izahay amin'izao andro izao. Ny toe-javatra dia mety tsy azo antoka ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa.
Ny telegrama tsy tapaka dia manandrana mamatotra anao amin'ny fifanarahana maharitra. Ireo mpampiasa Youtube TV dia afaka mamaha ny famandrihana amin'ny fotoana rehetra. Manoro hevitra anao izahay hampiasa an'ity sehatra ity ary hizara ny antsipiriany. Fividianana tena tsara io raha oharina amin'ireo safidy hafa misy eny an-tsena.
2. Mizara mora
Ny Youtube TV dia ahafahan'ny mpampiasa mizara ny kaontiny amin'ny fianakaviana mora foana. Ny sehatra dia azo zaraina amin'ny fitaovana enina samihafa indray mandeha. Ny tranokala koa dia manolotra streaming mitohy miaraka amin'ny tranokala 3 miaraka.
Ankafizinao ny mijery atiny rehefa miasa miaraka amin'ny namana sy fianakaviana. Ny sehatra dia miantoka fa mahazo serivisy premium ny mpampiasa.
3. Fanohanana fitaovana
Ny sehatra Youtube TV dia manohana ireo fitaovana mahatalanjona rehetra izay afaka mampandeha serivisy mivantana. Manoro hevitra anao izahay hampiasa an'ity mba hanombohana miasa miaraka amin'ny atiny haingana.
Ny sehatry ny fahitalavitra youtube dia manana fampiharana ho an'ny smartphone, fahitalavitra marani-tsaina ary lalao ho an'ny lalao. Ny lisitry ny fitaovana mifanentana goavana tokoa, satria manandrana manao mora ny toerana i Google.
Ireo ny sasany amin'ireo fiasa premium natolotry ny Youtube TV ho an'ny mpampiasa azy rehetra.
Ny vidin'ny serivisy rehetra dia zava-dehibe tokoa amin'ny fiasana eo amin'ny tobin'ny mpampiasa. Manantena izahay fa ho azonao ny antsipiriany rehetra. Izy io dia mety indrindra ho an'ny mpanjifa izay te-hividy ny drafiny. Tsy misy fonosana mampisafotofoto hita ao amin'ny tranonkala. Ny serivisy dia manolotra serivisy tokana izay ampy ho an'ny zavatra ilainao rehetra. Ny totalin'ny vidin'ity serivisy ity dia $ 64.99 / mo.
Vidio izao Fahitalavitra Youtube ofisialy Website.
Ahoana ny fampiasana kaody fampiroboroboana Youtube TV?
Ny fizotry ny fampiasana kaody promo ao amin'ny tranonkala dia tsotra. Azonao atao ny manaraka ireo dingana etsy ambany.
Afaka manomboka ny mpampiasa mitsidika ny fahitalavitra Youtube sehatra. Ny rohy ho an'ny tranonkalaHahatonga anao any amin'ny pejy fandraisana ao amin'ny forum izany. Ho hitanao eto ny safidy maimaim-poana. Azonao atao ny manindry an'io mba hanombohana ny fizotry ny fisoratana anarana.
Ny mpampiasa dia afaka manao sonia amin'ny alàlan'ny kaonty Google -ny amin'ny lampihazo. Ilaina ny mividy ny famandrihana. Mila manana an'ity kaonty ity ianao; raha tsy izany dia tsy azo ampiasaina ilay lampihazo.Ireo mpampiasa vaovao dia tsy maintsy miditra ao amin'ny kaody Zip USA. Ilaina izany satria any Etazonia ihany no misy ilay sehatra.
Ireo mpampiasa dia mila mahita drafitra mety amin'ny filan'izy ireo. Ankoatra ny safidin'ny vidin'ny drafitra dia ho hitanao ny safidy kaody promo. Ampiharo ny kaody, izay manome anao ny fihenam-bidy lehibe indrindra.
Ny dingana farany dia ny manampy ny mombamomba anao. Hanomboka ny famandrihanao izy io ary hanome tosika lehibe anao.Afaka mandoa vola amin'ny alàlan'ny fomba maro ao amin'ny tranonkala ny mpampiasa. Raha vantany vao vita ny fandoavam-bola, afaka manomboka mankafy ny serivisy premium-n'izy ireo ny mpampiasa.
Amazing! Ankehitriny ianao dia afaka mahazo serivisy fahitalavitra Youtube amin'ny fihenam-bidy lehibe.
Ny kaody promo amin'ny fahitalavitra Youtube dia mety ho sarotra ny mahita an-tserasera. Amin'ity toro-lalana ity dia valio ny fisalasalanao rehetra momba izany. Manomboha mampiasa ny serivisy anio ary mankafiza streaming mivantana.
Avadiho ny Youtube ho endrika Mp3
Cheer Season 2: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao!
FIFA 22 – Ny zava-baovao rehetra amin'ny lohateny fanavaozana 8!
ny fomba hijerena youtube rehefa voasakana
mandray karama amina fanomezana Amazon
finday avo lenta ho an'ny iphone
tsy amin'ny netflix nandritra ny taona maro
mora ny sarimihetsika feno megavideo